चोरी आरोपमा सप्तरीका एक किशोर ३ दिनदेखि बन्धनमा, गाउँपालिका प्रमुखकै छोराको संलग्नता ! – Nepal Press
चोरी आरोपमा सप्तरीका एक किशोर ३ दिनदेखि बन्धनमा, गाउँपालिका प्रमुखकै छोराको संलग्नता !
२०७८ वैशाख २४ गते १६:१५
जनकपुरधाम । सप्तरीमा चोरीको आरोपमा एक किशोरलाई हात-खुट्टामा फलामे साङ्लाले बाँधेर तीन दिनदेखि यातना दिइरहेको घटना सार्वजनिक भएको छ ।
छिन्नमस्ता गाउँपालिका-६ कुपही टोलका १८ वर्षीय शिवकुमार मुखियालाई चोरी आरोपमा मदिरा पसल चलाएर बसेका संजय पण्डित र उनका दाइ जागेश्वरले बाँधेर यातना दिइरहेका छन् ।
स्थानीयका अनुसार पण्डितको मदिरा पसलमा वैशाख २१ गते राति चोरी भयो । चोरी गरेको शंकामा मुखियालाई घरबाटै समातेर ल्याइयो र यातना दिए । यातना खेप्न नसकेर मुखियाले चोरी स्वीकारेको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन् ।
२२ गते बिहानदेखि नै मुखियाको हातखुट्टामा साङ्लो बाँधेर ताला लगाइएको छ । स्थानीय कपिल मुखिया भन्छन्, ‘खाना पानी केही नदिई भोकै र प्यासै उनलाई बन्दी बनाएका छन् ।’भोकले छटपटाएको देखेपछि आफूले राति घर ल्याएकोमा पुन: फर्काएर लगी यातना दिइरहेको उनले बताए ।
ती युवालाई यातनाका लागि व्यापारी पण्डितलाई गाउँपालिका प्रमुख सूर्यनारायण मण्डलका छोरा सत्यनारायणले साथ दिएको स्थानीयको दावी छ । ‘यातना दिन लगाउनमा सत्यनारायणको भूमिका निकै छ । उनी स्वयंले कुटपिट गरेका छन् । उनको अगाडि कसैले प्रतिवाद गर्न सक्दैनन्’, स्थानीय एक युवकले भने ।
व्यापारी पण्डितले लगाएको आरोप मुखियाका आफन्तले स्वीकार गर्न तयार छैनन् । बुबा रामस्वरूप मुखिया भन्छन्, ‘मेरो छोरा नै चोर हो के प्रमाण छ ? जबर्जस्ती यातना दिएर चोरी गरेको कुरा स्वीकार्न लगाएका छन् ।’
सप्तरीकै अधिकारकर्मी सुनिता साहले चोरीको आरोपमा खुट्टामा नेल लगाएर राख्नु अपराध भएको बताउँछिन् ।
उनले भनिन्, ‘चोरी नै गरेको हो भने प्रशासनले कारबाही गर्नसक्छ । तर, व्यक्तिले कानून हातमा लिन मिल्दैन ।’ उनले बाँधेर राखेका किशोरलाई अविलम्ब उद्धार गर्न स्थानीय प्रशासनसँग माग पनि गरेकी छन् ।
सप्तरीका प्रहरी प्रमुख एसपी राजेन्द्र धमला घटनाबारे थाहा पाएपछि बुझ्न इन्सपेक्टरलाई पठाएको बताए । उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘गाउँपालिका प्रमुखले पनि घटनाबारे बुझिरहेको भनेर भन्नुभएको छ । प्रहरी पनि रेस्क्यू गर्न पठाएको छु ।’
मुखियालाई हातखुट्टा बाँधेर यातना दिइरहेको विषयमा एसपी धमलाले अनभिज्ञता जनाए ।
प्रकाशित: २०७८ वैशाख २४ गते १६:१५